प्रतिनिधिसभामा भट्टराईको नियमापत्ति «
प्रतिनिधिसभामा भट्टराईको नियमापत्ति
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्टली डिसअर्डर भनी भनिएको शब्दप्रति नियमापत्ति गरे ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली मेन्टली र फिजिकली ठीक नभएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले नियमापत्ति गरे । उनले मेन्टली डिसअर्डर भन्ने अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न गरे । उनले मर्यादित र सम्मानित सदनमा अमर्यादित र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू आफुहरूका लागि गम्भीर आपत्तीजनक भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “मैले नियम २६ बमोजिम नियमापत्ति गर्न खोजेको । भर्खरै बोल्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले व्यक्तिप्रति इंगित मानसिकता खराब भएको, मेन्टली डिसअर्डर भएको जस्ता अभिव्यक्तिहरू पटक पटक दोहो¥याएर भने । म प्रश्न गर्न चाहन्छु । त्यो भन्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट छ ? उहाँसँग के प्रमाण छ ? के तथ्यका आधारमा उनले यो भन्दैै हुनुहुन्छ ? सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक सदस्यलाई यहाँ स्वास्थ्यको परीक्षणको बारेमा बताउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
उहाँसँग आधार के छ ? कसले प्रमाणित गरेको छ ? त्यसकारण यो मर्यादित ठाउँमा, सम्मानित ठाउँमा, जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने यो महत्वपूर्ण निकायमा अमर्यादित खालका र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि गम्भीर आपत्तीजनक छ । र यो रेकर्डबाट हटाइयोस् । अन्यथा नेकपा एमाले यो कुरालाई कुनै हालतमा पनि सहँदैन भन्ने कुरा सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु । ”
यसअघि बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यादवले पुर्व प्रधानमन्त्री ओली मेन्टली र फिजिकली पनि ठिक नभएको र आफूले सो कुरा एउटै पार्टी भएका बेला भन्दै पनि आएको बताए ।
उनले आफूखुसी काम गर्न रोक लगाएपछि वर्तमान सरकारलाई परमादेशको सरकार भनी टिप्पणी गरेको भन्दै सांसद यादवले आपत्ती जनाए । उनले भने, “मैले एउटै पार्टी हँुदा । स्थायी समितिको बैठकमा नै भनेको थिएँ ।
कमरेडहरू उहाँ मेन्टली पनि ठीक हुनुहुन्न । फिजिकली पनि ठीक हुनुहुन्न त्यसैले कुनै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ । यो जिम्मेवारी किन बोकाउनुहुन्छ ? उहाँलाई अन्याय किन गर्नुहुन्छ ? म एमालेका माननीय मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहाज उडाउने क्याप्टेनहरूको मेडिकल चेक हुन्छ, देशकै जहाज उडाउन दिएपछि दुर्घटना हुँदैन ? पार्टीकै जहाज उडाउन दियो भने दुर्घटना हुदैन ? हामीलाई दुख लागेको छ । लगभग दुईतिहाइको सरकार खतम भएर गठबन्धनको सरकार बन्यो । यो गठबन्धनलाई फेरि अप्राकृतिक रे, अनुचित, अपवित्र ।
संयुक्त जनाआन्दोलन पनि गठबन्धनबाटै भएको हो । अनि त्यसको उत्पादन अपवित्र होइन ? संविधान पनि सबै मिलेर बनाएको होइन ? संविधान पनि अपवित्र भयो । आफ्नो सरकार पनि गठबन्धनबाटै हो नि म पनि त्यसमा मन्त्री थिएँ नि । के तपाईहरू कहिलेही पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभएन ? कांग्रेसको सरकारमा बस्नुभएन ? बडा विचित्र छ के, आफु गर्दा ठीक, अरुले त्यही काम गर्दा बेठिक ? थोरै पनि नैतिकता हुनुपर्यो । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संविधान स्वीकार्य भयो । प्रधानमन्त्रीमा बस्नलाई सहमति तोड्ने । प्रधानमन्त्री बन्नलाई मोर्चा बनाउने लागि चुनावी गठबन्धन गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीमै टिक्नलाई त्यो पनि तोड्ने । पदको लागि सबै बरवाद गरेको छ । आन्दोलन बरवाद गरेको छ । पार्टी वरवाद गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पार्यो । ऊ आएर सानले बोल्छ । सबै खतम । हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तै आफुले आकाश थामेको अरु सबैले डुबाउन खोजेको जस्तो । परमादेश परमादेश । सबैजनाको त मेन्टल बिग्रेको हुँदैन नि । ”
जनादेशकै आधारमा संविधान बनेको र प्रतिनिधिसभा पनि जनादेशकै थलो भएको भन्दै उहाँले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई परमादेशबाट ब्युँतिएको र वर्तमान सरकार पनि परमादेशबाटै भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओलीलाई राजीनामा गर्न चुनौति दिनुभयो । उहाँले परमादेशबाट संसद ब्युँतिएको अभिव्यक्ति दिने सबैलाई राजीनामा गर्न पनि आग्रह गरे ।
उहाँले भन्नुभयो “एउटा बहस उठेको छ । परमादेश र जनादेश । परमादेशको कुरा गर्ने मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो हाउसमा हामी परमादेशबाट होइन जनादेशबाट आएका हौ । जनादेशकै आधारमा संविधान बनेको हो । संविधानले दिएको अधिकार उचित र अनुचित ढंगले प्रयोग गर्ने कुरामा विवाद भएको हो । म त संविधान ठिक छैन भनेर सडकमा कराइरहेको मान्छे हो । बरु हामीले यो संविधान ठीक छैनभन्दा राम्रो हुन्छ तर संविधान मान्ने मान्छेहरूले संविधानको प्रयोग गर्दा, आफ्नो खुसी प्रयोग गर्न खोज्दा रोक्दाखेरी सरकार परमादेशबाट आएको हो भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली जीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाउसमा नआईकन राजीनामा दिए हुन्छ । चुनाव लडेर आए भईगो नि त ।
परमादेशबाट आएको छ भन्ने जो जोलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ । परमादेश भन्ने अनि जनादेशको अपमान गर्ने ? जनादेशबाट निर्माण भएको प्रतिनिधिसभा हो । जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने । जुन सदनमा आएर उभिनुभएको छ । त्यसैैको अपमान गर्ने । आफ्नो मर्यादालाई विर्सने काम नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।”